31000 qof oo la filayo in ay iska dhiibaan Sweden | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden ayaa soo saartay qayaasteeda sanadka ayadoo filaysa in sanadka 2011 ay 31000 qof iska dhiibaan Sweden. Sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa Sweden iska dhiibtay 31 819 qof taasoo ahayd siyaado dhan 32% marka loo barbar dhigo sanadkii 2009. Guud ahaan dadkii Sweden ay deganaanshaha siisay ee sanadkii 2010 ayaa gaaraya 90,000 qof kuwaas oo ay ku jiraan dadka deganaanshaha shaqada iyo kan ardaynimada helay. Tiradaas ayaa hoos u dhacday 7,000 qof taasoo loo aanaynayo diidmada la diiday mideynta reeraha Soomaaliya.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa soo saartay qayaasteeda sanadka ayadoo filaysa in sanadka 2011 ay 31000 qof iska dhiibaan Sweden. Sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa Sweden iska dhiibtay 31 819 qof taasoo ahayd siyaado dhan 32% marka loo barbar dhigo sanadkii 2009.
Guud ahaan dadkii Sweden ay deganaanshaha siisay ee sanadkii 2010 ayaa gaaraya 90,000 qof kuwaas oo ay ku jiraan dadka deganaanshaha shaqada iyo kan ardaynimada helay. Tiradaas ayaa hoos u dhacday 7,000 qof taasoo loo aanaynayo diidmada la diiday mideynta reeraha Soomaaliya.
s/c marka hore salan diiran ayaan hawada idiin soo marinayaa aad iyo aadna waan idiinku mahad celinayaa magacaygu waa mustafa waxan joga hargeysa waxana i farxad galisa sida wararka aad nooga haqab tirtan warar wanaagsan ayaad noo soo tabisan marka waxan idinka codsanlahaa. 1. inaad wararka naga hubisan 2. inaad isha noogu haysan warar qaaska ah ee qoysaska la isku diidanyahay wakhtiga aya sweden somalida u fasaxayso ogonaanshaha. thanks mr; jimcaale waxad tahay muwaadin ku dayasho mudan..
asc dhamaan shaqaalaha webka iyo aqristayaasha webkaan aad ayaa ugu riyaaqnay waxaad noosootabisaa sweden waqtiga ogolaashaha bilaawi doonto iyo rajo fiican hadii ey jirto